ktmkhabar.com - अमेरिकाले पठाएको कोभिड खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ ? पख्नुहोस्…
अमेरिकाले पठाएको कोभिड खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ ? पख्नुहोस्…
काठमाडौँ – अमेरिकी सरकारले पठाएको जोनसन एन्ड जोनसनको खोपले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने गरेको खुलेको छ । उक्त खोपले स्नायु प्रणालीसम्बन्धी एक प्रकारको दुर्लभ अवस्थाको जोखिम बढाउन सक्ने अमेरिकाको औषधिसम्बन्धी नियामक निकायले जनाएको छ ।
खाेपजोनसन एन्ड जोनसन